ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုး အကူးစက်ခံရသူ ၁၅ ၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ထဲမှာ ကျန်းမာရေးလုပ်သားက ၄၈၀ လောက်ရှိနေပြီး ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးရသူ စုစုပေါင်း ၃၃၅ ဦးထဲမှာ ဆရာဝန် အနည်းဆုံး ၃ ဦးပါနေတယ်လို့ ပါကစ္စတန် အစိုးရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ နှောင်းပိုင်းလောက်ကမှ စပြီး ဒီရောဂါဖြစ်ပွါးလာတဲ့ ပါကစ္စတန်မှာ အခု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၅၀၀ နီးပါး ဒီရောဂါပိုး အကူးစက်ခံနေရတာဟာ အတော့်ကို စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပါကစ္စတန်အစိုးရ မကြာသေးခင်ကမှ ထူထောင်လိုက်တဲ့ ဗဟိုဌာန NCOC မှာ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး Zafar Mirza က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ ဆရာဝန် ၂၂၀ ၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သူနာပြုက တသိန်းခွဲ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံတဝှမ်း ရောဂါရှင်တွေကို အန္တရာယ်ကြားကနေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ဒီကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေ လိုအပ်တဲ့ တကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေး ဝတ်စုံတွေ ပစ္စည်းတွေ မပြတ်အောင် လုပ်ပေးနေပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီရောဂါရှင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ကုသပေးနေသူတွေကို အဓိက ပံ့ပိုးပေးနေတတယ်လို့လည်း Mirza က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီရောဂါရှင်တွေကို ကုသရင်း အသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့ ဒီကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေကို အာဇာနည်တွေ အဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေအတွက် နစ်နာကြေး ချီးမြှင့်မယ့် နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ကိုလည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရသူနဲ့ သေဆုံးသူ အရေအတွက် တဟုန်ထိုး တိုးလာတယ်လို့လည်း NCOC အကြီးအကဲ ဖြစ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး Asad Umar က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဒီရောဂါပိုးကူးစက်မှုရှိမရှိ. စစ်ဆေးမှုကို အရင်က တနေ့ကို လူ ၅၀၀ တောင်မစစ်ဆေး နိုင်တဲ့ အခြေနေကနေ အခု တနေ့ကို လူ ၈၅ ၀၀၀ လောက် ဆေးစစ်နိုင်ခဲ့ တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ပါကစ်စတနျမှာ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ၄၈၀ ခနျ့ ကိုဗဈကူးစကျနေ
ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ရောဂါပိုး အကူးစကျခံရသူ ၁၅ ၀၀၀ ကြျောရှိတဲ့ ထဲမှာ ကနျြးမာရေးလုပျသားက ၄၈၀ လောကျရှိနပွေီး ဒီရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးရသူ စုစုပေါငျး ၃၃၅ ဦးထဲမှာ ဆရာဝနျ အနညျးဆုံး ၃ ဦးပါနတေယျလို့ ပါကစ်စတနျ အစိုးရက ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။
ဖဖေျေါဝါရီလ နှောငျးပိုငျးလောကျကမှ စပွီး ဒီရောဂါဖွဈပှါးလာတဲ့ ပါကစ်စတနျမှာ အခု ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ၅၀၀ နီးပါး ဒီရောဂါပိုး အကူးစကျခံနရေတာဟာ အတေျာ့ကို စိုးရိမျစရာ ဖွဈနတေယျလို့ ဒီရောဂါတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ပါကစ်စတနျအစိုးရ မကွာသေးခငျကမှ ထူထောငျလိုကျတဲ့ ဗဟိုဌာန NCOC မှာ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီး Zafar Mirza က သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
ပါကစ်စတနျမှာ ဆရာဝနျ ၂၂၀ ၀၀၀ ကြျောရှိပွီး သူနာပွုက တသိနျးခှဲ လောကျရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ နိုငျငံတဝှမျး ရောဂါရှငျတှကေို အန်တရာယျကွားကနေ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ ဒီကနျြးမာရေး လုပျသားတှေ လိုအပျတဲ့ တကိုယျရေ ကာကှယျရေး ဝတျစုံတှေ ပစ်စညျးတှေ မပွတျအောငျ လုပျပေးနပွေီး လောလောဆယျမှာတော့ ဒီရောဂါရှငျတှနေဲ့ တိုကျရိုကျ ထိတှကေု့သပေးနသေူတှကေို အဓိက ပံ့ပိုးပေးနတေတယျလို့လညျး Mirza က ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီရောဂါရှငျတှကေို ကုသရငျး အသကျပေးခဲ့ကွရတဲ့ ဒီကနျြးမာရေး လုပျသားတှကေို အာဇာနညျတှေ အဖွဈနဲ့ သတျမှတျပွီး သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှအေတှကျ နဈနာကွေး ခြီးမွှငျ့မယျ့ နိုငျငံတျောအစီအစဉျကိုလညျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ပါကစ်စတနျမှာ ရကျပိုငျးအတှငျး ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရသူနဲ့ သဆေုံးသူ အရအေတှကျ တဟုနျထိုး တိုးလာတယျလို့လညျး NCOC အကွီးအကဲ ဖွဈတဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝနျကွီး Asad Umar က ပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ ဒီရောဂါပိုးကူးစကျမှုရှိမရှိ. စဈဆေးမှုကို အရငျက တနကေို့ လူ ၅၀၀ တောငျမစဈဆေး နိုငျတဲ့ အခွနေကေနေ အခု တနကေို့ လူ ၈၅ ၀၀၀ လောကျ ဆေးစဈနိုငျခဲ့ တာကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။